Fitondrana Rajaonarimampianina Mila ranondranony amin’i Afrika atsimo
Samy resy lahatra ny filoha Afrikanina tatsimo Jacob Zuma sy ny filoha Malagasy Hery Rajaonarimampianina fa manana anjara toerana goavana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny sehatra tsy miankina.
Nihaona ary nidinika amin’ny fomba hanatsarana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta izy mirahalahy ireto ny alakamisy alina teo tany Pretoria taorian’ilay fivorian’ny mpamatsy vola ho an’i Madagasikara. Nifantohan’ny dinika ny fametrahana tontolon’ny fandraharahana milamina sy azo antoka, ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny famoronan’asa hiteraka harena. Nilaza ny filoha Rajaonarimampianina raha niresaka tamin’ny mpanao gazety tany an-toerana fa nahafa-po azy ilay fihaonana niarahana tamin’ny mpamatsy vola nandritra ny roa andro tao Pretoria-Afrika atsimo, ary tsy maintsy hisy ny fametrahana fotodrafitrasa mifanaraka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy kasaina hatao. Nasiany tsindrim-peo ihany koa ny resabe manodidina ny fitokanana zava-bita sy ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. Raha tahaka izany ny fomba fijerin’ny olona sasany dia ho fampielezan-kevitra manontolo ny fotoam-piasan’ny filohan’ny repoblika satria tsy maintsy hiasa sy hanangana izy, hoy ny tenany somary nananihany. Tokony hiova ny fomba fijery sy ny fomba fisainana raha te handroso marina isika. Tsikaritra fa miezaka manatsara fifandraisana amin’i Afrika atsimo ny fitondrana HVM. Asa na fikarohana famatsiam-bola na paikady hamafana tsimoramora ny lazan’i Marc Ravalomanana izay niaina tany nandritra ny enin-taona ary tena manana fifandraisana lalim-paka tokoa amin’ny mpandraharaha Afrikanina tatsimo.